Warqad ku socota Madaxweyne Axmed Qoor-Qoor - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Warqad ku socota Madaxweyne Axmed Qoor-Qoor
Warqad ku socota Madaxweyne Axmed Qoor-Qoor
April 18, 2020 admin964
Warqad ku socota madaxweyne Ahmed Abdi Kaarie
Mudane madaxweyne, ugu horrayn salaan muxubbo leh iga guddoon. Marka xiga waxaan Alle kaaga baryayaa oo kuu rajaynayaa in aad ku guulaysatid masuuliyadda culus ee aad qaadday.
Mudane madaxweyne, waxaad si rasmi ah oo nabdoon ula wareegtay masuuliyadda ugu sarraysa Galmudug. Ayaamahan talooyin, ducooyin iyo dardaaran badan ayaa laguu jeedinayaa. Waa sida la yeelo qof walba oo loo cumaamado masuuliyad ummadeed.
Mudane madaxweyne, aniga oo taas ka duulaya waxaan kuu soo diray warqaddaan kooban. Ugu horrayn waxaan ku xasuusinayaa maahmaahdii soomaaliyeed ee ahayd “nin xil qaaday eed qaad”. Nuxurka maahmaahdaasi waxa uu sheegayaa in masuuliyaddu leedahay culays, eed iyo daal. Waliba masuuliyadda Galmudug maanta oo kale laga qabto kuma sii jirto. Xilka aad qaadday eed aad qaadday u fahan. Waxaan kale oo ku xasuusinayaa in aad caawa haysatid fursad aad ku noqon kartid halyeey taariikhda Galmudug baal dahab ah ka gala, oo waligii la xasuusnaado. Waayo, waxaad haysataa awood iyo mansab aan cid kale Galmudug ka haysan oo aad isbeddel weyn ku samayn kartid: madaxweynenimo.
Mudane madaxweyne, waxaad masuul u noqotay bulsho qabiillo kala irdhoobay oo dagaallamay ah. Waxaad madax u noqotay maamul fadhiid ah oo dhinac walba u burbursan. Waxaad hoggaamiye u noqotay gobollo iyo degmooyin kala go’an oo dhaqaale ahaan u baaba’san. Waxaad xilka la wareegtay xilli culaysyadaas oo dhami ay jiraan, uuna dheer yahay xanuunka Covid-19 ee adduunka gabawaray.
Mudane madaxweyne, dhanka kale, fursado aysan helin madaxdii hore ee Galmudug soo hoggaamisay ayaad haysataa. Maanta Galmudug oo dhami adiga ayay maamul ahaan ku hoos joogtaa, kolka laga reebo degmooyinka gacanta Alshabaab ku jira. Ma jiro maamul kale oo kaa dhinac shaqaynaya oo caqabad kugu ah. Xiriir fiican ayaad leedihiin madaxda Federaalka ee hadda joogta, oo lama filayo in ay kugu jiq siiyaan, sidii ay yeeleen Md. Xaaf. Xilligaan waxaa jira dareen iyo xiise ay reer Galmudug u qabaan in uu isbeddel ballaarani ku dhaco Galmudug.
Mudane madaxweyne, arrimahaas oo dhami waa fursado. Laakiin dammaanadqaad uma haysatid in uu xaalku sidaas sii ahaan doono. Durba ka faa’iidayso, oo wakhtigu inta aanu ku qaban masaafo dheer jar. Ha nasan. Wax walba way isbeddeli karaan, waliba siyaasaddu kuma sii jirto oo xowli yaab leh ayay isku rogrogtaa. Xasuusnow maahmaahdii ahayd “gees lo’aad kulaylka ayaa lagu gooyaa”. Haa, siyaasadda Galmudug iyo tan Soomaaliyaba waa gees lo’aad oo waliba maroorsan.
Mudane madaxweyne, dib-u-dhacyada Galmudug ee dhaqaaleed, bulsheed, siyaasadeed iyo horumarineed way ka culus yihiin kuwo afar sano lagu dhammayn karo. Laakiin wax baad bilaabi kartaa. Waddo ayaad jeexi kartaa, ay qaadaan madaxda kaa danbaysa. Himilooyin badan ayaad xaqiijin kartaa.
Mudane madaxweyne dhowr howlood xoogga saar. Labo, saddex, afar ama shan arrimood ku mintid oo shaqee, wixii ka soo harana ka gudub. Xukuumadaha taada ka danbeeya ayaa qaban doona wixii aad ka gudubtid. Baahiyaha oo dhan ma dabooli kartid, laakiin waad kala naqaysan kartaa, dabadeed baahiyaha ugu culus ee aad wax ka qaban kartid ayaad meel saari kartaa. Kuwaas ayaa laguu gu xasuusan doonaa.
Mudane madaxweyne, anigu waxaan kugu la talin lahaa in aad xoogga saartid lix qodob oo kali ah. Waa kuwaan hoos ku taxan:
Xoraynta degmooyinka uu ururka Alshabaab haysto
Dhismaha ciidammada kala duwan ee Galmudug
Ciribtirka dagaallada qabaliga ah ee Galmudug ka jira iyo asbaabahooda
Dhismaha dakadda Hobyo, iyo waddooyinka isku xira degmooyinka Galmudug
Dhammaystirka dastuurka Galmudug ah iyo dhismaha hay’adaha garsoorka iyo hanti-dhowrka
Dhismaha golayaasha degaannada ee degmooyinka Galmudug
Mudane madaxweyne, lixdaa shaqo xoogga saar. Saddexda qodob ee ugu horreeya amniga ayay khuseeyaan, qodobka afaraad dhaqaalaha ayuu taxaluqaa, labada qodob ee danbena waxa ay ku saabsan yihiin dhammaystirka haykalka dowladeed ee Galmudug. Lixdaa qodobba waxa ay ku jireen ballanqaadyadii aad Baarlamaanka Galmudug ka hor akhriday dhammaadkii Jannaayo. Lixdaa shaqaba waad qaban kartaa, ama ugu yaraan wax weyn ayaad ka bilaabi kartaa. Waan ogahay in ay culaysyo dhaqaale, siyaasadeed, bulsheed, farsamo iyo waayo’aragnimo ay jiraan. Waa xaqiiqo in aysan fududayn shaqooyinkani, laakiin haddana in dhan loo wada rido waa baahida koowaad ee ay Galmudug qabto.
Mudane madaxweyne, colaadaha qabaliga ah ee Galmudug ka jira fiiro gaar ah u yeelo. Labo sababood ayay salka ku hayaan: dhulballaarsi iyo dakanooyin. Inta ugu badan sababta koowaad ee dhulballaarsiga ah ayay salka ku hayaan. Marar badani dagaallo lagu hoobtayi waxa ay ka qarxeen barkad gorof ah oo meel laga qodoy. Dad badan oo reer Galmudug ah ayaa ka maqan magaalooyin iyo tuulooyin ay deggenaan jireen oo ay hantidoodii wali taallo. Dadkaasi xasili mayaan inta ay degmooyinkoodii ka maqan yihiin.
Mudane madaxweyne, sida ay ila tahay, saddex arrimood in la sameeyo waa muhiim si loo joojiyo dagaallada qabaliga ah ee soo noqnoqday. Koow: waa in dagaallada qabiilooyinka loo aqoonsado cadowga koowaad ee Galmudug, iyo danbi culus oo ciqaab adag lagu mutaysanayo. Labo: qofkii qof dila waa in aanu qabiil noqon ee danbigu isaga ku koobnaado, lana toogto. Saddex: waa in la xaqiijiyo in qof walba oo reer Galmudug ahi dagi karo meel walba oo uu doono, cid qashqashaadi kartaana aysan jirin. Labadaas arrimood lama fulin karo haddii aan la dhisin hay’ad garsoor iyo ciidamo fuliya go’aannada garsoorka, xasilloonida iyo nabadgalyadana ilaaliya. Dagaallada qabaliga ahi waxa ay noqdeen dhaqan la qaayibay, iyo wax iska caadi ah. Dhowr bilood markii la joogaba labo qabiil ayaa dad badan iska laaya, kuwa ka sii badanna iska naafeeya. Mudda xileedkaaga waxaad ku dadaashaa in aanu dhicin dagaal qabiilooyin u dhexeeya. Haddii aad taas ka dhabaysid, hubaal, waxaa dhaqan noqon doonta in aan qabiilooyinku is dagaalin.
Mudane madaxweyne, doorashadii aad ku soo baxday waxa ay lahayd xanaf iyo qalalaasooyin. Runtii doorashaba loogu ma yeeri karo, sida ay dad badan la tahay. Galmudug ceeb ayay ku ahayd in aysan maamulan doorashadeedii, ee ay Xukuumadda Federaalku u maamushay, iyada oo afar sano soo jirtay. Foolxumadaasi yaysan soo noqon. Sharciga iyo guddiga madaxbannaan ee doorashooyinka Galmudug in la sameeyo xoogga saar. Hannaanka dimuqraadiyanta Galmudug budli, oo hirgali. Waa in ay doorasho madaxweyne dhacdaa 2da Febraayo, 2024. Marna ha ku fakarin muddo kororsi.
Mudane madaxweyne, caddaaladdu waa laf dhabarka dowladnimo kasta oo tisqaad noqota. Bulshada reer Galmudug dhex u noqo, oo u caddaalad samee. Shaqooyinka, mashaariicda, fursadaha, deeqaha iyo dheefta Galmudug oo dhan waa in loo sinnaadaan. U xaqsoor bulshadaada, oo mar walba xasuusnow in aad wada matashid, oo aadan suldaan beeleed ahayn. Iska ilaali qabyaalad, iyo qabiilnimo. Jabi dabarka soomaalida ee ah: “Fiqi tolkii kama janno tago”. Tolkaa ka janno tag, haddii ay sidaas caddaaladdu ku jirto. Daqiiqadda aad samaysid fal qabyaaladeed ama eex waxaad ku kacday khiyaamo aad ku mutaysan kartid in maamuuska madaxnimo lagaa xayuubiyo, oo adduun iyo aakhiraba lagu gula xisaabtamo. Digtoonow.
Mudane madaxweyne, aad isaga fiiri dadka kugu hareeraysan ee aad la tashanaysid. Taariikhda faca weyn ee basharka waxyaabaha laga bartay waxaa ka mid ah in hoggaamiye walba ay saamayn aad u weyn ku leeyihiin lataliyayaashiisu. Tayada waxqabadkaagu waxa uu la mid noqon doonaa tayada dadka ka ag dhow go’aan qaadashadaada. Saqajaammada siyaasadda iska ilaali, oo iska fogee. Saqajaammada siyaasadda waxaan ka wadaa dadka afmiishaarnimada, ballanqaadka, safarrada iyo sawirrada u yaqaanna siyaasadda. Waa dad khiyaali ah oo damiinno ah oo aan waxba kugu kordhin doonin. Waxaad raadsataa, oo wasiirro ka dhigataa, oo isku hareeraysaa, dad dhab ah. Hubi qof walba oo aad xil u magacaabaysid in uu u qalmo xilka aad u magacaabaysid. Yaan qofna laguu keenin, oo hebel magacow lagu oran e, adigu dadka dooro. Ha isku hareerayn doqommo kuu guulwalleeya, oo ku ammaana, oo waaqaca been kaaga sheega. Kuwaasi way ku luminayaan, wakhti yar ee muddoxileedkaagu yahayna way kaa khasaarinayaan. Xasuunow, dadka kugu hareeraysan waxa ay hagaajiyaan iyo waxa ay halleeyaan ayuu leegasigaagu (legacy) noqon doonaa.
Mudane madaxweyne, musuqmaasuqu waa kansarka dilooday dowladnimada Afrika oo dhan. Kansarkaasi waxa uu curyaamiyaa dhaqaalaha iyo maamul wanaagga. Galmudug kama fiyooba kansarkaas ee saamigeeda ayay heshay. Meel walba waxaa ka socda mashruuc tayo xun oo musuqmaasuq ah oo dad lagu naasnuujiyo. Hay’adaha dowladda Galmudug iyagana musuqu wuu biyo dhigay. Xilliyada doorasahdana heerka ugu sarreeya ayuu gaaraa. Hadda ba haddii ay dhab kaa tahay dhismaha Galmudug macne leh la dagaallan musuqmaasuqa.
Mudane madaxweyne, way caddayd madaxda Federaalka ee hadda joogta in ay kaa caawiyeen xilka aad ka qabatay Galmudug. Dan bay taas ka lahaayeen. Ugu yaraan in aad ka caawisid sidii ay u soo noqon lahaayeen ayay kaa naawilayaan. Ugu yaraan. Hadda ba ka digtoonow in aad dantooda siyaasiga ah u loogtid danta Galmudug. Masuuliyadda koowaad waxa ay kaa saaran tahay Galmudug dadkeeda, degaankeeda, danteeda iyo dastuurkeeda. Haddii ay iska horyimaadaan danta Xukuumadda Federaalka iyo danta Galmudug, danta Galmudug ogow.
Mudane madaxweyne, intaas ayaan kusoo gaabinayaa qoraalka. Nabad ahow, oo guulayso.
W/Q: Cabdiwahaab Saqa
Al Shabaab oo Fagaara Ku Toogatay 6 Qof
Puntland dil ku fulisay 7 Nin
khasaaraha Weerarkii Hotelkii Kismaayo oo kordhay